पाकिस्तानमा पक्राउ परेका पाइलटका छोरालाई पाकिस्तानी सेनाको मन छुने पत्र — News of The World
संसार न्यूज संवाददाताफागुन १७, २०७५
१७ फागुन, काठमाडौं। पछिल्ला दिनमा भारत पाकिस्तान बीच बढ्दै गएको विवादले संसारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । छिमेकी देश भएका कारण नेपालमा यस बारे झनै चर्चा र टिकाटिप्पणी छ । पाकिस्तानमा आक्रमण गर्न पठाइएको भारतीय वायुयानलाई पाकिस्तानले कब्जामा लियो । पाकिस्तानी सेनाले आफूले पक्राउ गरेका भारतीय वायुसेनाका पाइलट अभिनन्दन बर्तमानलाई आज रिहा गर्दैछ । बिहिबार पाकिस्तानी संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री इमरान खानले पक्राउ परेका भारतीय सेना अभिनन्दनलाई शुक्रबार भारतलाई सुम्पिने घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणा लगत्ते पाकिस्तानी सेनाले पाइलट अभिनन्दनका छोरालाई सम्बोधन गर्दै एक पत्र लेखेको छ । यो पत्र अभिनन्दन, उनकी पत्नी र उनका छोराको पारिवारिक फोटोसहित ‘पाकिस्तानी आम्र्ड फोर्सेज’को फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको बैगुनीलाई गुनले मार्ने यो कार्यको विश्वले सरहाना गरिरहेको छ । द्वेष र बदलाका सट्टा शान्ति र भातृत्वको सन्देश दिने उनको यो कार्यबाट प्रधानमन्त्री इमरानको उचाई ह्वात्तै बढाएको छ ।
पत्रमा लेखिएको छ
‘हाइ लिटिल बन्नी ’ बधाइ छ । तिमी छिटै आफ्ना पितालाई अंकमाल गर्न गइरहेका छौ । हामी उनलाई तिमीकहाँ उपहारको रुपमा पठाउँदैछौं, यो कुराको पर्वाह नगरिकन कि उनी यहाँ तिमीजस्तै कैयौंमाथि बम बर्साउन आएका थिए । बनी सुन । तिमीलाई मेरो एउटा अनुरोध छ । जब उनी भावुक भएर तिमीलाई अंकमाल गर्नेछन्, कृपया मेरो तर्फबाट उनीसँग केही प्रश्नहरु सोधिदिनू । उनीसँग सोध्नू – ड्याड, के मजस्तै कश्मिरी बालबालिकाहरुसँग आफ्ना पिताको साथमा खुसीसाथ बाँच्ने अधिकार छैन रु उनीसँग सोध्नू – यदि उनीहरुले तपाइँलाई हिंस्रक भीडको बीचमा छोडिदिएको भए ?उनीसँग सोध्नू – युद्ध र घृणाको मूल्य के हुन्छ ? उनीसँग सोध्नू – के शक्तिशाली हुन्छ, घृणा कि माया ? उनीसँग सोध्नू – जीवन र मृत्युमा के सुन्दर हुन्छ ? म यी प्रश्नहरुको जवाफको प्रतिक्षामा हुनेछु ।
खुसी रहनु लिटिल बन्नी । म चाहन्छु एक दिन तिमी आफ्ना पितासँग हामीकहाँ आउ । हातमा बम र मिसाइल होइन, फूल लिएर आउ । अनि अझै एउटा कुरा – म बाचा गर्छु कि, हामी कसैलाई पनि तिम्रो मुस्कान खोस्न दिने छैनौं र विनाशको लागि हाम्रो जमिन प्रयोग हुन दिने छैनौं । आफ्ना पितासँग खुसी रहनू ।
विदेशबाट रित्तोहात फर्किएका घिमीरे तरकारीखेतीबाट लाखौं कमाउँछन्